Usekhiphe i-video u-DJ wase-Napierville | Eyethu News
Crunch talks as Mugabe and generals thrash out his exit - 36 mins ago
Merkel in final push for coalition to avert crisis - 37 mins ago
Sixth Miss World win draws India level with Venezuela – WATCH - 46 mins ago
Usekhiphe i-video u-DJ wase-Napierville
“Ukuzimela kunzima kakhulu uma ungenayo inkampani enkulu.”
UMKWEBHI wamapuleti osezakhele udumo eMgungundlovu namaphethelo uMnuz Muvo “De Icon” Mshengu (24) waseNapierville usekhiphe i-video okubonakala sengathi izodla ubhedu kulonyaka. Le-video ethi- On it uyikhiphe ngenyanga edlule kanti seyamukelwe ngabaningi ngezandla ezifudumele njengoba kubonakala izindawo eziyingqophamlando kuyo okubalwa iCity Hall, Golden Horse kanye nezinye.
UMnuz Muvo oseneminyaka eyisithupha engumkwebhi wamapuleti uthi isifiso sakhe ukubona amaciko (artists) aseMgungundlovu ephumelela. “Ukuba umkwebhi wamapuleti kwakuyisifiso sami ngisakhulula ngangivele ngiwumuntu othanda umculo. Inhloso yami ukuthi ngiphakamise lelidolobha lethu ngilibeke kwelinye izinga,”kubeka uMnuz Muvo.
Uqhube wathi lengoma yakhe usezinhlelweni zokuyihambisa kwi- Channel 0 ukuze kube lula ukuthi enze ushintsho akwazi ukusayina amaciko amaningi kwinkampani yakhe ebizwa nge- Icon Muzic okwamanje esanabaculi ababili. UMnuz Muvo uthe wenza izifundo ze-Public Relations eDurban University of Technology ngoba efuna ukuthola ulwazi ukuze kube lula ukuthi azimele ngizenzele mina yonke into, ngibe sengenza izifundo zomculo eGoli.
“Ukuzimela kunzima kakhulu uma ungenayo inkampani enkulu ngoba uzenzela yonke into akukho muntu okusizayo ukhipha nemali ephaketheni lakho. Bengingakalikhiphi icwecwe ngisalinde ukuthola ingoma ezoduma eNingizimu Afrika yonke mase ngiyalikhipha okwamanje izingoma zami ziyatholakala kuma- itunes,” kuphetha uMnuz Muvo.
Ugwetshwe 23 weminyaka ngokudlwengula nokuphanga isisulu
Kukhalwa ngomonakalo odalwe wukugcwala kwesitamkoko eFrance
Kumenywa onobuhle baseMlazi ku-Mr noMiss Summer 2017
Kuthungathwa umbulali wesalukazi, 75